July 2021 – CELE WINGAGAR
နိုင်ငံခြားက ဆေးရုံတစ်ခုမှာ တွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ်ရာ ထူးတိုးသွားတဲ့ ချစ်သူဒေါက် တာလေးအတွက် ဂုဏ်ယူနေတဲ့ မေမီကိုကို
July 31, 2021 100million 0
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မေမီကိုကိုကတော့ Facebook ပေါ်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ် ဦးနဲ့မေတ္တာမျှနေတာပါနော်။ ဆရာဝန်လေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် မနာလိုသူတွေရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခို က်ခြင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရပါေ သးတယ်နော်။ ဘယ်လိုပဲ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါပစေ တွဲလက်မဖြုတ်ဘဲ ကြိုက်လာခဲ့ကြတာ တစ်နှစ်တောင် ပြည့်တော့မှာပါနော်။ မေမီရဲ့ […]
ခိုင်းချင်တာခိုင်း အောင်လအန်ဆန် နိုင်ရင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ က တိအ တိုင်း လုပ်ပေး လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင်….
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းစွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖူးပွင်ခိုင် ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူ မရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ထူးခြားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဆက်ဆီ ကျကျအမိုက် စားပုံလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစားလူကြိုက်များ တာလည်းတွေ့ရပါတယ်..။ သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး […]
ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ တတပ်တအားပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လုံးဝအဖမ်းမခံရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကို ထောက်ပြလာတဲ့ပရိတ်သတ်ကြောင့် အရှိုက်ထိသွားတဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)….
ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ တတပ်တအားပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လုံးဝအဖမ်းမခံရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကို ထောက်ပြလာတဲ့ပရိတ်သတ်ကြောင့် အရှိုက်ထိသွားတဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း) ပရိသတ်ကြီးရေ သုသုလို့ အများက ခေါ်ကြတဲ့ မိတ်ကပ် ညီညီမောင်ကတော့ အမေစုကို ချစ်ခင်သူတစ်ဦးပီပီေ နွဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်နော်။ စစ်ကောင်စီမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့အခါမှာတော့ သုသုတစ်ယောက် […]
ကွပျတညျးနတေဲ့ မွနျမာပွညျသူ အခြို့အတှကျ ထမငျး ဘူး ၁၀၀တိတိ ဆကျသှယျလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားမငျးသား LEE SEO HO
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံကတော့ မွနျမာနိုငျငံက ပွညျသူတှကေို ရရာနညျးလမျးနဲ့ အစှမျးကုနျ အားပေးကူညီနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့က မွနျမာပွညျသူတှေ ခံစားနရေတဲ့ဒုက်ခတှကေို စာနာနားလညျပေးတဲ့အပွငျ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောပါ တဈဖကျတဈလမျးကနေ ပါဝငျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။တောငျကိုရီးယားနိုငျငံက Model ၊ သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Lee Seo Ho ကလညျး မွနျမာ့အရေးမှာ […]
ဖခင်ဖြစ်သူခံစားခဲ့ရတဲ့ မာယာ များတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါလ က္ခဏာ အကြောင်းပြောရင်း ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ထုတ်နိုင်စေဖို့ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ ညီနန္ဒ…
ပရိတ်သက်ကြီးရေအနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ရပ်တည်အောင်မြင်နေပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ညီနန္ဒကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူဟာဆို ပြည် သူတွေဘက်က ရပ်တည်ရင်း တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ (၅၀၅ – က) နဲ့ တရားစွဲဆို ခံထားရပြီး လွတ်မြောက်ရာကို ထွက်ပြေး […]
ချစ်သူကောင်မလေးက ဆံပင်အရှည်ထားမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဆံပင်အရှည်ထားနေရြေ ကာင်းကို ချစ်စဖွယ်ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ချစ်သူ
သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ်သ တ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ချစ်သူဇင်မြ င့်အောင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပရဟိတလုပ်ငန်းများစွာကိုအတူတကွလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ခိုင်နှင်းဝေဆီမှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်လဲရှိပါသေးတယ်နော်။လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်ေ နတဲ့ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်တွေကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ခိုင်နှင်ဝေတို့ကလဲတတ်နိုင်သလောက်သွားရောက်မေးမြန်းပြီးလိုအပ်တာများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ခိုင်းနှင်ဝေနဲ့သူရဲ့ချစ်သူကတော့နားရက်တွေမှာလဲအတူတကွဖြတ်သန်းကြပါတယ်။ချစ်သူကောင်မလေး ခိုင်နှင်းဝေကဆံပင်ရှည်မှကြိုက်တယ်ဆိုလို့အရှည်ထားနေရတဲ့ဇင်မြင့်အောင်က ဆံပင်ရှည်မှကြိုက်တယ်ဆိုတော့လဲ….ဆိုပြီးတော့သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။ Credit သရုပျဆောငျခိုငျနှငျးဝကေတော့ကရြာဇာတျကောငျတှမှောအကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ပရိတျသတျတှရေဲ့အးပေးမှုကိုအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့မငျးသမီးကွီးပဲဖွဈပါတယျ။ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ခဈြသူဇငျမွငျ့အောငျနဲ့ပူးပေါငျးပွီးတော့ပရဟိတလုပျငနျးမြားစှာကိုအတူတကှလုပျကိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျ၊ ခိုငျနှငျးဝဆေီမှာတော့ခဈြစရာကောငျးတဲ့သမီးလေးတဈယောကျလဲရှိပါသေးတယျနျော။လကျရှိမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ရောဂါ ကပျဆိုးကွီးနဲ့သဘာဝဘေးအန်တာရာယျတှကွေောငျ့အခကျအခဲဖွဈနကွေတဲ့ပွညျသူတှမြေားစှာရှိနပေါတယျ။ခိုငျနှငျဝတေို့ ကလဲတတျနိုငျသလောကျသှားရောကျမေးမွနျးပွီးလိုအပျတာမြားကိုကိုယျတိုငျကိုယျကသြှားရောကျလှူဒါနျးပေးနတောပဲဖွဈပါတယျ၊ ခိုငျးနှငျဝနေဲ့သူရဲ့ခဈြသူကတော့နားရကျတှမှောလဲအတူတကှဖွတျသနျးကွပါတယျ။ခဈြသူကောငျမလေး ခိုငျနှငျးဝကေ ဆံပငျရှညျမှကွိုကျတယျဆိုလို့အရှညျထားနရေတဲ့ဇငျမွငျ့အောငျက ဆံပငျရှညျမှကွိုကျတယျဆိုတော့လဲ….ဆိုပွီးတော့သူရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာပုံနဲ့တကှဖျောပွထားပါတယျ။ Credit […]
လူဝတ်လည်းပြီးပြီးချင်းမှာပဲ ရုပ်ဖျက်ပြီး ပြည်သူတွေအတွက် ဆေးတွေလိုက်ဝယ်ပေးနေတာကြောင့် တစ်ချို့လူတွေရဲ့အထင်လွဲခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးကြီး သိင်္ဂီထွန်းကတော့ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက် သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရသူများကို မကြည့်ရက်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်၊ ရှင်သီဝရိဂမုန်းပင်၊နဂါးဆက်ပင်တွေဟာအောက်ဆီဂျင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက် သူမရဲ့အိမ်အနောက်မှာ စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေကို မျိုးပွားဖို့ သီလရှင်ဝတ်ကြီးနဲ့လုပ်နေတာကို မသင့်တော်ကြောင်း ပြောကြတဲ့အတွက် လူဝတ်လဲခဲ့ရတာ […]
ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပန်းချီ/ သရုပ်ဆောင် ဦးခိုင်တင် ယနေ့ကွယ်ကွန်…
ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပန်းချီ/သရုပ်ဆောင် ဦးခိုင်တင် ယနေ့ကွယ်ကွန် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကို ပြည်သူအတော်များများ ကူးစက်ခံနေရပြီး ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အနုပညာရှင်တချို့နဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်း ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ကွ ယ်လွန်သွားကြတာကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ယနေ့မှာလည်း မြန်မာပရိသတ်‌ အတော်များများနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီး ဦးခိုင်တင်တစ်ယောက်လည်း […]
ရဘေေးကွောငျ့ အခကျအခဲ ဖွဈနတေဲ့ အိမျထောငျစု (၁၀၀) စာ အ တှကျ မိတျဆှေ တှနေဲ့ စုပေါငျးကာ လိုအပျတာတှေ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ နဝေငျးတို့ ဇနီးမောငျနှံ
ခုလတျတလောမှာဆိုရငျ တဈခြို့ တောငျတနျး ဒသေတှမှော မိုးရှာသှနျးမှုတှကွေောငျ့ ရကွေီး ၊ ရလြှေံမှုတှေ ဖွဈပျေါနပေါတယျ ။ နအေိမျတှေ နဈမွှပျသညျအထိ ရဘေေးကို ကွုံတှနေ့ရေတာကွောငျ့ ဒသေခံတှေ ခကျခဲစှာ နထေိုငျနကွေရပါတယျ ။ ဆေးရုံတှလေညျး ရတှေဝေငျလို့ ကိုဗဈလူနာတှကေို ရှပွေ့ောငျးနကွေတဲ့ ပုံတှကေ တကယျ စိတျမကောငျးစရာပါ […]
လှူဒါနျးပေးဖို့ ဝယျယူ ထားတဲ့ အောကျစီ ဂငျြအိုးတှေ ရောကျရှိ လာပွီဖွဈတဲ့ အကွောငျး သတငျး ကောငျးမြှဝလောတဲ့ Ah Boy
ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော အဆိုတျော Ah Boy ကတော့ မကွာသေးခငျအခြိနျက ပွညျသူတှလေိုအပျနတေဲ့ မောကျစီဂငျြတှကေို လှူဒါနျးပေးသှားဖို့ စီစဉျနခေဲ့တာ ပရိသတျတှသေိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါနျော။ ဒီနမှေ့ာတော့ Ah Boy က သူလှူဒါနျးမယျ့ အောကျစီဂငျြနဲ့ ပတျသကျတဲ့ သတငျးကောငျးလေးကို မြှဝဖေျောပွလာခဲ့ပါတယျ။ “ကြှနျတျောတို့ညီအကိုနှဈယောကျမှ အခမဲ့လှူဒါနျးခွငျးမြား/ အခမဲ့ငှါးရမျးပေးခွငျးမြား ပွုလုပျပေးရနျအတှကျ […]
မာမားကိုအိမ်အလုပ်တွေဘာကြောင့်ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတာလည်းလို့ သမီးလေးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါ ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားလေးကြောင့် ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဇူးဇူးမောင်
မထငျမှတျထားတဲ့ အကွီးဆုံးလောကဓံကို ကွုံပွီးနောကျ ဘာမဆိုရငျဆိုငျရုံပဲလို့တှေးတတျသှားတယျ လို့ နနျးမွတျဖွိုးသငျးရငျဖှငျ့လာ
သူမလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ ခြေတုလေးနဲ့ အဆင်ပြေပြေလမ်းလျှောက်ကာဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ